Ngwunye uzuzu Finasteride (98319-26-7) hplc ma98% | AASraw mmekọahụ ntụ ntụ
/ ngwaahịa / Mmekọahụ Mmebi Hormones / Finasteride ntụ ntụ
SKU: 98319-26-7. Category: Mmekọahụ Mmebi Hormones
AASraw nwere njikọ na mmepụta site na gram ka usoro nchịkọta nke Finasteride ntụ (98319-26-7), n'okpuru ụkpụrụ CGMP na usoro nchịkọta mma.
Mmetụta nke Finasteride ntụ ntụ emepụtara iji mebie Mbelata testosterone ka dihydrotestosterone nke na-eme n'ihi na hormone testosterone na-emetụta site na 5-alpha reductase enzyme. Mmetụta nke Finasteride siri ike na data prostate egosiwo na ọnwa 6 nke ọgwụgwọ Finasteride nwere ike ịmalite ọbụna iji belata okpukpu prostate.
Raw Finasteride ntụ ntụ video
Nzuzu Mgbakwunye ụbụrụ nke kachasị na-emepụta
Molekụla Formula: C23H36N2O2
Ọbara arọ: 372.54
agba: White siri ike ntụ ntụ
Raw Finasteride ntụ ntụ eji
Propecia, Proscar, ntụchi Finasteride (CAS 98319-26-7)
Finasteride bụ maka iji ọnụ ekwu okwu. Maka BPH, ndị nkịtị na-agba ọsọ na 5mg oge, otu ugboro n'ụbọchị. Maka ntutu isi nwoke, 1mg oge, otu ugboro n'ụbọchị.
Ịdọ aka ná ntị na ngwugwu Finasteride
Ọ bụ ọtụtụ ndị ikom na-edozi ntụ ntụ nke dị na CAS 98319-26-7. Mmetụta mmetụta kachasị mma nke Finasteride ga-agba gburugburu mmekọahụ. Ụfọdụ ndị ikom, ọ bụ ezie na ọ dị oke ụkọ ka ha kọọrọ igosi mgbaàmà gynecomastia, na ụkọ rashes.
Ọ bụ ezie na nchịkọta Finasteride nwere ike ịba uru n'oge anabolic steroid, buru n'uche na ọ na-arụ ọrụ maka steroid ndị a tụlere n'elu. Ọzọkwa, iji Finasteride na Testosterone, Methyltestosterone ma ọ bụ Fluoxymesterone nwere ike belata nsonaazụ na irè nke ndị dị otú ahụ steroid. Nke a ga - eme ka onye ahụ jiri onye na - emechi ihe mgbe ọ dị mkpa; ma ọ bụrụ na ọ bụghị, enweghi ihe ọ bụla na-eji ọgwụ steroid anabolic. Ekwesịrị ịdebe, ebe Finasteride agaghị enwe mmetụta na ogige DHT ma nwee ike ime ka androgenicity nke Nandrolone na Trenbolone, ọ ga-enwe mmetụta dị oke nfe ọ bụla na-emeghị ka androgenic belata mmetụta na Boldenone (Equipoise) na Methandrostenolone (Dianabol).
Raw Finasteride ntụ ntụ ntụ ntụ (CAS 98319-26-7)
Raw Finasteride ntụ ntụ Marketing
Esi zụta Finishide ntụ ntụ (CAS 98319-26-7) site na AASraw
AASraw na-enye 98% Clean Cleaner raw ntụ ntụ na bodybuilders ma ọ bụ n'okpuruala labs maka ojiji ojiji.
Finasteride Raw Powder Recipes:
ebee ka m nwere ike ịzụta oke ntụcha finasteride
1 nyochaa maka Finasteride ntụ ntụ
Finasteride ntụ ntụ bụ ọgụgụ isi